Akwụkwọ Ismael El-Qudsi na Martech Zone |
Edemede site na Ismael El-Qudsi
Nọmba ndị ahụ dị egwu. #Snapchat na-etu ọnụ ihe karịrị 100 nde ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike kwa ụbọchị na ihe karịrị ijeri 10 kwa ụbọchị nlele vidiyo, dị ka data dị n'ime. Netwọk mmekọrịta na-aghọ onye ọkpụkpọ isi n'ọdịnihu nke ahịa dijitalụ. Kemgbe mmalite ya na 2011, netwọkụ a na-eto ngwa ngwa, ọkachasị n'etiti ọgbọ dijitalụ nke ndị ọrụ naanị ekwentị. Ọ bụ ihu na ihu ihu ọha, nke na-akpachi anya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere mmekọrịta dị oke mkpa. Snapchat bụ netwọkụ